Rag loo haystay inay kufsi kula kaceen wiilal yar oo Baydhabo lagu toogtay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Rag loo haystay inay kufsi kula kaceen wiilal yar oo Baydhabo lagu toogtay
Allhadaaftimo August 18, 2020 Uncategorized
Waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay lagu toogtay labo nin oo la sheegay in bishii hore ay magaalada dhexdeeda kufsi ugu geysteen ilmo yar.
Raggan oo maxkamad la soo taagay, kaddibna xukunkan lagu riday ayaa la sheegay in hore ay u geysteen fal noocan oo kale ah.
Dadweynaha magaalada ayaa soo dhoweeyay arrintaas oo ay aad u hadal hayeen.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Siciid Cali oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay in dad kale oo arrimahaas loo soo xiray ay jiraan.
“Runtii maalmihii la soo dhaafay waxaa Baydhabo ka dhacayay falal gaboodfallo ah oo dhanka jinsiga la xiriira, marka falalkii waxay noqdeen kuwo soo laalaabtay, dad fara badan ayaa loo xiray runtii oo dembigaa lagu helay oo maxkamad la soo taagay, qaarkood weli waa lagu guda jiraa. Arrimahaas waxaad mooddaa in magaalada Baydhabo ay ka dhaceen wax aan hore looga baran annagana ka mas`uuliyad ahaan ay aad noo taabatay.” Ayuu yiri wasiirka.
Dhawr dhacdo oo kufsi ah oo lagula kacay wiilal yaryar ayaa laga soo weriyay magaalada Baydhabo dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay, taasoo aad uga caraysiisay dadweynaha ku nool magaaladaasi waxaana la rumeysan yahay inay soo dadajisay toogashada labada nin ee dhalinyarada ah ee maanta la toogta
Previous Puntland oo la qabsaday hubkii ugu badnaa & Ciidamo gacanta ku dhigay
Next Roob kada’ay Magalada Badhan o Dhaqtarkii !!!!!